Ndeapi ehutsanana-hutsanana mirau inofanirwa kuteedzera matatoo? | Kunyora
Ndeapi ehutsanana-hutsanana mirau inofanirwa kuteedzera matatoo?
Iwe une tattoo here kana kuboora studio kana unoshanda pane micropigmentation? Ipapo iwe unofanirwa kuziva iyo yehutsanana hutsanana mirau inodiwa mune yega yega nzvimbo kuti basa rinogara riine 100% rakavimbiswa. Hatipokana kuti iwe unoenderana nematanho ese, asi hazvikuvadze kuarangarira.
Vanhu vazhinji uye vanoenda kunzvimbo dzekunyora kana studio kuti vakwanise kutora hupenyu hwavo kana ndangariro paganda ravo. Asi kuti mhedzisiro ive inonyengedza uye pakati matanho akanakisa ehutsanana, iyo nzvimbo inoda kutevera nhanho shomanana kuitira kuti isu tese tisiye tichifara nebasa rakaitwa uye nenharaunda zvakazara. Iwe unoda here kuziva izvo zvavari?
1 Ndeapi mitemo uye matanho ehutsanana anofanirwa kuteedzera matatoo
2 Maitiro ekuchenesa iwe unofanirwa kuziva
3 Maitiro ekuziva kana iyo tattoo muenzi inoenderana nehutsanana zviyero
Ndeapi mitemo uye matanho ehutsanana anofanirwa kuteedzera matatoo
Pane zviyero zvakawanda zvekufunga nezvazvo, asi pasina kupokana, tinofanirwa kutanga nezvakanyanya kukosha, izvo zvine hutsanana, uye ndiko kuti, kuti nzvimbo yedu igare yakachengeteka, hatikwanise kusvetuka mitemo yehutano nehutano Nekuti chete nenzira iyi uye tichifunga zvese zvaunoda, isu tinenge tichipa hukuru kuchengetedzeka kune vese vatengi vedu asiwo isu pachedu. Ndezvipi izvo zvinodiwa zvekutanga?
Isu tiri mune imwe nguva yehupenyu hwedu mairi kugeza maoko nesipo uye nemvura kunopfuura kukosha. Naizvozvo, zvakare mumatato nzvimbo kana ma studio zvinopfuura zvekutanga.
Mushure mekugeza uye nemaoko akachena zvakakwana, isu tichaisa pamavhosi. Izvi zvinogara zvichingove kushandiswa kumwe chete.
Muchiitiko chekuti tine rumwe rudzi rwevanga, isu tinofanira kurifukidza zvakanaka, nebhandeji iro, kana zvichibvira, harina mvura. Asi kana izvi zvisingaite, saka zvinogara zvirinani kudzosera chikamu.
Mushure mekushandisa kwega kwega, izvo zvinhu zvinofanirwa kuenda kuburikidza neiyo sterilization kana disinfection maitiro.
Iwe unofanirwa kuwedzera zvinodzivirira zvakadai semasikirini, majasi kana chero chimwe chinhu chinodzivirira iyo tattoo muimbi asiwo mutengi iye.
Maitiro ekuchenesa iwe unofanirwa kuziva
Mushure mekuona ndedzipi matanho akajairika atinofanira kutora kushandisa mushe basa redu, tinofanirwa kuramba tichisimbisa iyo nzira dzekuchenesaku. Pakutanga isu tichafanirwa kubheja pane izvo zvinonzi asepsis iyo inobata nemaitiro ekushandisa matanho akakodzera ehutsanana, kudzivirira hutachiona kusvika kuhupenyu hwedu. Asi kana tisingazive kuti varipo here kana kuti kwete, isu tichaenda kune antisepsis, inova nzira chaiyo yekuchenesa yezvinhu zvese, sezvo antiseptics ichibva kwairi, icho sechinhu chaicho, ichataura kune tupukanana vanoda kuisa maturusi ebasa.
Saka zvese izvi, nehutsanana hwakanaka sekutaura kwedu, zvinogona kuchengetedzwa zvakanaka. Usakanganwa ku disinfect, asi kwete chete izvo zvishandiso asiwo nenzvimbo kwaunoshanda (kamwe pazuva pazuva zvirinani) uye dzimwe nzira senge machira kana fanicha yaunoshandisa. Pasina kukanganwa kubereka, inova zvakare imwe yehunyanzvi inochengetedza hutsanana uye inodzivirira marudzi ese ehutachiona, kunyanya izvo zvinhu zviri padyo nemucheka. Matanho nemaitiro anofanirwa kuitwa zvine hungwaru!
Maitiro ekuziva kana iyo tattoo muenzi inoenderana nehutsanana zviyero
Nhasi hazvizove zvakaoma kuwana matatoo studio anonyatso kutevedzera matanho uye hutsanana zviyero. Ichokwadi kuti izvi zviri kuvandudzwa uye nekudaro, vese nyanzvi vanofanirwa kuzviziva. Asi kana iwe uri mutengi, zvakanakisa kugara uchishanyira pakati uye kuve nechokwadi nezvazvo.
Chokwadi iwe unowana ipapo zvese zvinokwanisika zvinoratidza uye nezviratidzo zvinovimbisa inzvimbo yakanaka kwazvo yazvo. Kutaura nemutambi nyora kuchakupawo chengetedzo. Iwe unofanirwa kutarisa kuti zvese zvinoshandiswa zvinofanirwa kubviswa uye kuti zvinoraswa here, pamusoro pekuchenesa maoko nekushandisa chengetedzo yakakwana kwavari nekwatiri. Gara uzviise mumaoko akanaka!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos » Ndeapi ehutsanana-hutsanana mirau inofanirwa kuteedzera matatoo?
Kurasikirwa Kwakakura Kunobata Matattoos: Aya Mifananidzo Anoratidza
Flamingo tattoos uye zvazvinoreva